Zavatra 10 momba ny iPad Mini 4 | Vaovao IPhone
Raha mbola tsy fantatrao ny vaovao rehetra atolotry ny iPad Mini 4 vaovao, dia voavela heloka ianao. Aza manahy raha tsy afaka nahita ny antsipirian'ny takelaka mini Apple vaovao ianao, dia holazainay aminao momba azy ireo avy amin'ny iPad News izany.
Manify sy maivana noho ny iPad Mini 3.
Milanja 304 grama fotsiny, ny iPad Mini vaovao dia tsy mora kokoa noho ilay teo alohany, fa manify valo isan-jato ihany koa, mirefy 6,1mm fotsiny. Ny iPad Mini 3 dia nanana profil 7,5mm ka ny mahasamihafa azy roa dia 1,4mm matevina.
Ho fanampin'izay, mirefy 7,9 santimetatra ny efijery, manome habaka efijery betsaka kokoa noho ny iPhone 6s Plus ary azo entina lavitra noho ny iPad Air 2, miaraka amin'ny efijery 9,7-inch.
Tsy toy ny iPad iPad teo aloha, izay namboarina tamina singa telo miavaka sy misaraka ny efijery, ny iPad Mini 4 vaovao dia mampivondrona ireo sosona telo ireo ho iray. Ity fizotry ny fivorian'ny efijery ity, fantatra amin'ny Apple ho teknolojia finday anatiny, dia ampiasaina ihany koa amin'ny iPhone sy iPad Air ary manana tombony mazava: manafoana ireo toerana mety azo noforonina teo anelanelan'ny sosona izy io. Noho izany, ny fifanoherana tsara kokoa, ny loko misy ny zava-misy ary ny sary voafaritra kokoa no raisina izay toa nolokoina teo amin'ny efijery fa tsy natao nomerika. Ny fahatsapana sy ny fahamendrehan'ny efijery dia nihatsara koa, indrindra amin'ny fanekena ny fihetsika haingana. Ary farany, ny fitsaboana manokana manohitra ny taratry ny saina dia mampihena ny flare amin'ny 56 isan-jato.
Tsy manana ny heriny na ny fahombiazan'ny iPad Air 2 izy io
Na eo aza ny zava-drehetra nambara sy ny fampielezan-kevitra momba ny varotra natombok'i Apple momba an'io, ny iPad Mini 4 vaovao dia tsy manana hery mitovy na fampisehoana mitovy amin'ny iPad Air 2 izay nampitahana azy hatramin'ny Manzana. Raha ny marina ny iPad Air 2 dia mampiasa processeur A8X nohatsaraina ary ny iPad Mini 4 dia mampiasa ny processeur A8 izay ampiasain'ny iPhone 6. Ka tsia; tsy mitovy ny hery sy ny fahombiazana.
IPad Mini 4 dia misolo ny iPad Mini 3
Tsy misy tsy ampoizina amin'izao. Noho ny fahombiazana kely nomen'ny iPad Mini 3 sy ny anjara birikiny ho an'ny Apple range, nanapa-kevitra ny orinasa fa ny iPad Mini 4 vaovao dia hisolo ny mini 3 eny an-tsena ary noho izany, ilay singa mahazo fihenam-bidy amin'ny vidiny dia ny iPad Mini 2.
Wifi haingana kokoa
Ho fanampin'ny microchip A8 namboarina mahery vaika, ny iPad Mini 4 vaovao dia misy rafitra fifandraisana an-tariby nohatsaraina kokoa. Ny fifandraisana Wi-Fi dia mandeha amin'ny fenitra 802.11an ka hatramin'ny telo hafa haingana kokoa, ny 802.11ac, teorika afaka mahatratra 866 Mbps.
Batterie capacité ambany
Ny bateria iPad Mini 4 dia kely lavitra noho ny teo alohany, na izany aza dia mahatratra ny faharetany mitovy amin'ny sisa amin'ireo fitaovana Apple manana kalitaon'ny bateria ambony kokoa. Ny baterian'ny maodely vaovao dia manana fahaiza-manao 19.1 WHr ary ny an'ny teo alohany dia manana 23.8 WHr.
Best iSight Trigger
Ny fakan-tsary any aoriana an'ny iSight an'ny iPad Mini 4 dia nandeha tamin'ny 5 ka hatramin'ny 8 megapixels, fakan-tsary iray izay mifanaraka kokoa amin'ny haitao izay nitaingenany. Ankoatry ny fitsambikinana megapixels, ny fakan-tsary dia manana sensor vaovao sy tombontsoa azo avy amin'ny processeur signal izay miaraka amin'ny microchip A8 an'ny fitaovana. Izy io dia manana fahaizana manatsara ny famantarana ny tarehy, miaraka amin'ny sary maranitra sy madio kokoa.
Na eo aza ny halehibeny kely, Apple dia miaro fa ny iPad Mini 4 dia manohana tsara ireo fomba vaovao marobe amin'ny iOS 9.
Ny iPad Air 2 no fitaovana Apple voalohany nampiditra RAM 2GB. Ankehitriny, ny iPad Mini 4 dia manambatra azy ho fitaovana Apple miaraka amin'ny RAM avo indrindra, afa-tsy ny iPad Pro, izay avo roa heny.
Tsy manohana tranga iPad Mini 3
Ny tranga IPad Mini 3 dia tsy mifanaraka amin'ny iPad Mini 4 vaovao noho ny fiovan'ny refy ao amin'ilay fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Zavatra 10 momba ny iPad Mini 4
Miaraka amin'ny iOS 9 Siri dia hianatra hamantatra ny feonao
Ny pre-order ho an'ny iPhone 6s dia hanomboka amin'ny 00:01 rahampitso